काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एव समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई कोभिड-१९ को जोखिम भनेको भारतसँग भएको खुला सिमाना रहेको बताएका छन् । सोमबार डा. भट्टराईले ट्विट गर्दै भनेका छन् । कोभिड-...